Iindaba - Ukubaluleka kwamanyathelo esanding ekusebenzeni ngomthi
Ukubaluleka kwamanyathelo entlango ekusebenzeni ngomthi
Iindlela zokugaya zibandakanya ukugaya okomileyo, ukugaya amanzi, ukugaya ioyile, ukugaya i-wax kunye nokucoca amazinyo. Ukugaya okomileyo kunokwahlulwa kube kukugaya okungagungqiyo, ukugaya tyaba kunye nokugaya kakuhle. Ukugaya okungafunekiyo kusetyenziselwa ukususa uboya beenkuni, amanxeba, amanqaku e-glue kunye neepensile kwinto engenanto eyenziwe ngokhuni ngaphambi konyango lwe-Bai, ngelixa ukusila okuthe tyaba kuhlala kusetyenziselwa ukugaya inqwelomoya enkulu ngelaphu lesanti kunye nephepha lesandpaper lisongelwe ngeebhloko ezincinci zomthi okanye irabha enzima, ke Impembelelo yokulinganisa ilunge ngakumbi, ukugaya okuhle kusetyenziselwa ukubekwa uphawu, ukupeyinta uphawu, ukuthelekisa umbala kunye nokuzaliswa kombala emva konyango olunye oluphakathi, ukugaya isanti kufuna unonophelo. Ukusila amanzi kukusebenzisa isandpaper efakwe emanzini (okanye amanzi anesepha) yokugaya. Ukugaya amanzi kunokunciphisa amanqaku okuwohloka, kuphucule ukutyabeka okuthe tyaba, kwaye ugcine umsebenzi kunye nephepha lesanti.
Amanyathelo esanding adlala ngezantsi kweendima ezintathu ezibalulekileyo:
Akukho 1: Ukususwa kweebreyithi, ukungcola okunamafutha kumphezulu we-substrate
Hayi 2: Ngobuso be-putty ekhuhliweyo, umphezulu ngokubanzi urhabaxa kwaye ufuna ukuba uyotywe ngesanti ukuze ufumane umphezulu ogudileyo, ngoko ke ukwenza isanti kunokunciphisa uburhabaxa bomhlaba womsebenzi;
Hayi 3: Ukuphucula ukunamathela kwengubo. Phambi kokutshiza ifilimu entsha yepeyinti, kuye kufuneke ukuba ipolishi ifilimu endala yepeyinti emva kokomisa okunzima. Ngenxa yokuba ukutyabeka kunamathele kakuhle kumgangatho ogudileyo ngokugqithileyo, ukubambelela ngoomatshini kwengubo kunokuqiniswa emva kokucoca.
Ngokubanzi, sinokulandela le miyalelo ingezantsi:
Umzimba oMhlophe oMhlophe oMhlophe: 180 # Grit ----- 240 # Iphepha lesanti
Ngamaplanga okanye umaleko esezantsi primer sanding: 220 # uhlalutye ----- 240 # uhlalutye iphepha sanding
Isinyathelo sesibini se-primer: 320 # Grit ----- 400 # Grit sanding paper
Primer umphezulu okanye ukugqiba ipeyinti: 600 # uhlalutye ----- 800 # iphepha isanti uhlalutye
Ukucoca ipeyinti yokugqiba: 1500 # Grit ----- 2000 # Iphepha lesanti elirhabaxa